रोग अनुसार भोजन, कुन रोगमा के खाने, के नखाने ? – सुनाखरी न्युज
रोग अनुसार भोजन, कुन रोगमा के खाने, के नखाने ?
Posted on: October 14, 2020 - 6:53 am
जथाभावी खानपानले शरीरलाई रोगी र जीर्ण बनाउँछ भने सुपाच्य, ताजा र सन्तुलित खानाले शरीरलाई निरोगी । कस्तो खाना खाने र कति खाने भन्ने कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यो कुरा अझ त्यसबेला महत्वपूर्ण हुन्छ, जतिबेला हामीलाई कुनै न कुनै रोगले च्यापिसकेको हुन्छ । खाना ओखति हो र खाना नै विष पनि । कस्तो खानपान उचित र कस्तो खानपान अनुचित हुन्छ ? जान्नुपर्छ ।